Imidiya yokuncokola-Ukuvala umsantsa | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 5, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Amashishini amaninzi kakhulu afikelela kunxunguphalo lokuba angakhange ayamkele imithombo yeendaba zentlalo kwaye esoyika ukuba sele lixesha. Ndiyayithanda le infographic evela kumhlobo olungileyo, Jason Falls, kuba inika ukuqonda kusetyenziso lokwenyani… kunye nenyani yokuba kusekho amathuba amaninzi kumashishini okunyusa amajelo asekuhlaleni ukukhulisa ishishini labo.
Oko bekuthethile… ixesha liqala ukuphela. Ndiyoyika ukuba, kwiminyaka embalwa, iinkampani zingaphulukana nesabelo sentengiso kwiinkampani ezikhuphisanayo ezamkele imidiya yoluntu njengendlela yokukhuthaza kunye nokuzibandakanya kunye nethemba labo kunye nabathengi. Ukuba iinkampani azenzi nto kungekudala, ziya kuzifumana zisemva kancinci kwabo bakhuphisana nabo njengoko ezo nkampani zikhulile igunya lazo kunye negama lazo kwi-intanethi.
Njengoko uJason esitsho, umbutho wakhe ukhona iinkampani zoncedo zivala umsantsa. Qiniseka ukuba ukongeza ukuKhangela iMithombo yeendaba kuluhlu lwakho lwezifundo ezibalaseleyo kwaye ulandele umhlobo wam olungileyo Jason Falls Kwi-Twitter, nayo.